नारायणी लामिछाने, नुवाकोट १२, मंसिर । १० गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्लामा ६७ प्रतिशत मत खसेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दुई लाख आठ हजार एकसय ९१ मतदाता मध्ये आइतबार सम्पन्न मतदानमा एक लाख ३९ हजार ७ सय ६१ मतदाताले मतदान गरेका छन् । निर्वाचनमा कुल खसेको मत ६७.१४ प्रतिशत रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जनार्दन अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा ७४.९० प्रतिशत मत खसेकोमा अहिलेको निर्वाचनमा त्यो भन्दा करिब आठ प्रतिशत कम मत खसेको हो ।
आइतबार भएको मतदानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं. १ मा एक लाख पाँच हजार २ सय ८७ जना मतदाता रहेकोमा ६९ हजार ८ सय ६४ मतदाताले मतदान गरेका छन् । यो ६६.३६ प्रतिशत रहेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं २ मा एक लाख दुई हजार ९०४ मतदाता रहेकोमा ६९ हजार ८ सय ९७ मतदाताले मतदान गरेका निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं २ मा खसेको मत ६७.९२ प्रतिशत रहेको छ ।
मतदान गर्नेमा पुरुषको सङ्ख्या ७३ हजार एकसय ९७, महिलाको सङ्ख्या ६६ हजार ५ सय ६३ र एक जना तेश्रो लिङ्गी समेत रहेका छन् ।
प्रकाशित १२ मङ्गसिर २0७४ , मङ्गलबार | 2017-11-28 07:29:30
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवम् सांसद
ललितपुर २३, पुस । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवम् सांसद डा. बाबुराम पोखरेलको निधन भएको छ । उहाँ
रिमोट कन्ट्रोलबाट बम विष्फोट, गगन थापासहित
काठमाडौं— काठमाडौं-४ का काँग्रेस उम्मेदवार गगन थापालाई लक्षित गर्दै बम आक्रमण भएको छ । घटनामा उम्मेदवार थापासहित ११ जना घाइते भएका
नुवाकोटमा स्थानीय निर्वाचनको भन्दा
नारायणी लामिछाने, नुवाकोट १२, मंसिर । १० गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्लामा ६७ प्रतिशत मत खसेको छ । जिल्ला
मत सर्वेक्षण गर्न कसैले पाउदैनःप्रमुख
काठमाडौं ११, मंसिर । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई आधार मानेर कुनै माध्यम